“Xalwaddii Waxaa Cunay Kuwii Xaawa Gawracay”……. W/Q:- Eng Maxamed Habane. |
“Xalwaddii Waxaa Cunay Kuwii Xaawa Gawracay”……. W/Q:- Eng Maxamed Habane.
W/Q:- Eng Maxamed Habane.